UPapa u-Alexander VI nencwadi yoPapa Eyahlukanisa Amazwekazi | Ezasendulo
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine IsiBemba IsiBhunu IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLozi IsiLuvale IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwahili (SaseCongo) IsiSwidi IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTwi IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
Izinqumo Ezahlukanisa Amazwekazi
NGEMVA kokubuya kukaChristopher Columbus ohambweni lwakhe lokuqala lokuya emazweni aseMelika ngo-1493, inkosi yaseSpain yaphikisana neyasePortugal ngokuthi ubani okwakufanele alawule ezohwebo nokwakhiwa kwamakoloni kula mazwe ayesanda kutholakala. AbaseSpain bacela upapa u-Alexander VI ukuba abaxazululele le nkinga.
ABABUSI NOPAPA BAHLUKANISA AMAZWEKAZI
Izwe laseSpain nelasePortugal kanye nopapa, base becabangile kakade ngendaba yokwaba amazwe amasha ayesanda kutholakala. Ngo-1455, uPapa Nicholas V wanikeza iPortugal amalungelo akhethekile okuhlola amazwe neziqhingi ezigudle ingxenye yogu lwe-Atlantic ese-Afrika nokuba izithathele noma yini eyitholayo lapho. Ngo-1479, eSivumelwaneni sase-Alcáçovas, u-Afonso V wasePortugal nendodana yakhe iNkosana uJohn, banikeza uFerdinand no-Isabella baseSpain igunya lokubusa phezu kweziQhingi zaseCanary. Ngenxa yalokho, izwe laseSpain lagunyaza ukuba iPortugal ihwebe emazweni ase-Afrika futhi ibuse iziqhingi zase-Azores, eCape Verde nezaseMadeira. Ngemva kweminyaka emibili, uPapa Sixtus IV, waphinde wasiqinisekisa lesi sivumelwano, echaza ukuthi noma imaphi amazwe amasha atholakala ngaseningizimu nangasempumalanga yeziqhingi zaseCanary ayezoba ngaphansi kwePortugal.
Nokho, uJohn manje okunguJohn II wasePortugal, wathi amazwe ayetholwe uColumbus ayewela ngaphansi kwePortugal. Ababusi baseSpain basenqaba lesi sivumelwano, futhi bafaka isikhalazo kupapa owayesanda kugcotshwa u-Alexander VI, befuna ilungelo lokwakha amakoloni nelokuguqulela abantu ebuKristwini emazweni ayetholwe uColumbus.
Ngomdwebo nje wepeni, uPapa u-Alexander VI wahlukanisa amazwekazi
Esabela kulokho, u-Alexander wenza izinqumo ezintathu. Esokuqala sasithi, “ngegunya likaNkulunkulu uMninimandla onke,” sinika iSpain igunya eliphelele nelihlala njalo lokuzithathela izindawo ezintsha. Esesibili, sasiwukubeka umngcele osuka enyakatho uye eningizimu oyibanga elingaba amakhilomitha angu-560 uma usuka eziQhingini zaseCape Verde uya ngasentshonalanga. U-Alexander wathi, wonke amazwe ayesetholakele noma ayesazotholakala, angasentshonalanga yalowo mngcele, ayezoba ngawaseSpain. Ngomdwebo nje awenza ngepeni, lo papa wahlukanisa amazwekazi! Isinqumo sakhe sesithathu, sabonakala sinikeza izwe laseSpain igunya lokubusa ingxenye engasempumalanga kuze kuyofika kwelaseNdiya. Lokhu kwayicasula kakhulu iNkosi uJohn, emanxusa ayo ayesanda kuphothula uhambo lwawo lokuzungeza isiqongo se-Afrika, ngaleyo ndlela kwanda amathuba okuba iPortugal ihwebe ngomzila we-Indian Ocean.
UMNGCELE OMUSHA EBALAZWENI
Esecikekile ngu-Alexander, * uJohn waxoxa noFerdinand no-Isabella ngokuqondile. Umlobi uWilliam Bernstein uthi: “Ngenxa yokuthi babemesaba lo mPutukezi ononya, futhi bejatshuliswe ukuthola iZwe Elisha, laba babusi baseSpain bakujabulela kakhulu ukufinyelela esivumelwaneni esisha.” Ngakho ngo-1494, kwasayinwa isivumelwano edolobheni laseSpain iTordesillas futhi saqanjwa ngalo.
Lesi Sivumelwano SaseTordesillas sawulondoloza umngcele owawusuka enyakatho uya eningizimu owawenziwe ngu-Alexander kodwa sawuhlehlisela ngasentshonalanga ngamakhilomitha angu-1 480. Lokhu kwabonakala sengathi kwakuzokwenza yonke i-Afrika ne-Asia ibe “ngaphansi” kwePortugal, bese iZwe Elisha liba ngaphansi kweSpain. Nokho, lokhu kuhlehliswa komngcele kwenza ingxenye enkulu yezwe elalingakatholakali ngaleso sikhathi, kamuva eyaziwa ngokuthi iBrazil, yawela ngaphansi kokulawula kwePortugal.
Lezi zinqumo ezagunyaza izwe laseSpain nelasePortugal ukuba athathe futhi avikele amazwe ayesanda kutholakala, zaba isisekelo sokuchitheka okukhulu kwegazi. Lezi zinqumo azizange nje zibukele phansi amalungelo abantu ababehlala kulawo mazwe kuphela—okwabangela ukuba baphoqeleke ukuba ngaphansi kwabanqobi babo futhi baxhashazwe—kodwa futhi zadala izinxushunxushu osekungamakhulu eminyaka zikhona phakathi kwamazwe abanga ilungelo lokubusa nelenkululeko yokusebenzisa izilwandle.
^ isig. 9 Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ngalo papa odume ngokuba nenkohlakalo, bheka isihloko esithi “U-Alexander VI—Upapa IRome Engamlibali,” kuyi-Nqabayokulinda ka-June 15, 2003, amakhasi 26-29.
Opapa ngokulandelana kwabo, banxusa abaseSpain nabasePortugal ukuba baguqulele ebuKristwini noma ibaphi abangakholelwa kuNkulunkulu ababatholayo ohambweni lwabo lokufuna amazwe.
Ngo-1493, uPapa Alexander VI wabeka umngcele maphakathi ne-Atlantic owavumela abaseSpain ukuba babuse ingxenye yamazwe angasentshonalanga.
AbaseSpain, basebenzisa isinqumo sika-Alexander nezinye ezifana naso, ukuze bawabuse ngokugcwele amazwe amasha ayesanda kutholakala.
Kwaphela amakhulu eminyaka amazwe aseYurophu ehlasela noma evikela ukuba ngokomthetho kwezinqumo zopapa zokwaba izindawo.
Umlobi uBarnaby Rogerson uthi: “Le ndaba ebonakala ingakholeki manje, kapapa ongumRoma ohlukanisa wonke la mazwekazi ukuze nje kuzuze imibuso emincane emibili yaseYurophu, iyisibonelo esidumile sokuqhosha kwabantu baseNtshonalanga.” URogerson unezela ngokuthi lesi sinqumo sikapapa “singathathwa njengesiqalo salo lonke unya lwemibuso eyalandela eyakha amakoloni.”